Faradoboka, Iza ary no hofidiako?
2013-12-18 @ 08:10 in Politika
Hifarana sahady ny fampielezan-kevitra fa hiditra amin'ny fifidianana fihodinana faharoa isika eto Madagasikara. Hiditra amin'ny dingana vaovaon'ny tantaran'i Madagasikara indray ny olom-pirenena rehetra na tiany izany na tsy tiany, na iza lany eo na iza.
Nahitana zavatra isan-karazany tokoa ny fampielezan-kevitra fa ny tontolon'ny bilaogy no mety ho mangina amin'izany. Efa lasan'ny tontolon'ny fitaovam-pifandraisan'ny fiaraha-monina (tambajotra an-tserasera na tambajotra sosialy) tanteraka ny sehatra, saingy ny olana amin'ireny karazam-pitaovana ireny dia, mety tsy ho hitanao intsony ny zavatra nosoratanao vao tapabolana lasa izay. Izany no tombon'ny bilaogy na mety ho heverina ho lany andro aza izy indraindray: Voatahiry sy mora karohina hatrany izay nosoratanao na soa izany na ratsy.
Miara-dalana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana depiote, izay raha dinihana, dia niniana natao hampizara roa ny safidin'ny olona ary tsy hahazoan'ny mahaleotena vahana mihitsy. Raha izay moa no kinendry dia karazany nahomby sy nety ihany satria, fijery manokana ny ahy, na inona na inona filazana dia mersenera ara-politika izay mahaleotena lany eo, indrindra indrindra ka tsy maneho ny safidiny amin'izay hofidiany amin'ireo kandidà roa farany amin'ny filoham-pirenena izy. Mety hisy ny mahaleo tena,olona efa fanta-daza ka efa fantatra ny fironany, tsy manakiana ireny olona ireny aho fa misy antoko manana ny politikany hanandratra ilay olona kandidà fa somary manakona kosa ny antoko niaviany... ireny no mety ho maro kokoa amin'ireo mahaleotena mirotsaka sarotra kosa ny hahatafita ireo mahaleotena tsy fanta-piaviana eo amin'ny sehatry ny politika. Mahatalanjona tokoa ny mahita ireo mahaleotena sasantsasany tena mandrara-bola sy mandany harena tokoa mba hahalany azy ho depiote, ary tena mahery vaika noho ny fikambanana goavana ara-politika ny propagandy nataony.
Tsikaritra iray nivandravandra tamin'ity indray mitoraka ity ihany koa ny nisian'ny fifaninanana eo amin'ny mpiray ankolafy (indrindra fa ny ao amin'ny ankolafy Ravalomanana). Efa nisy ny tsi-fifampitokisana teo amin'ny mpitarika sy ny mpanaraka, ka tsy fantatra intsony hoe iza amin'ireo mpirotsaka ireo no to-teny kokoa eo anatrehan'ny mpanaraka. Ho hita eo ny fahombiazan'ny samy mirotsaka manoloana ireo kandidà hafa sy mahaleotena manambola be sy miezinezina ny propagandy nataony nandritra ny fotoana nanaovana izany. Arahiko maso manokana ny boriborintany fahadimy eto Antananarivo, faritra azo lazaina fa midadasika indrindra eto Antananarivo renivohitra (mahazo ny faritra avaratra sy atsinanan'ny tanànan'Antananarivo iray manontolo). Roa ny kandidà ofisialin'ny Ankolafy Ravalomanana, tena samy ofisialy, ary hifaninana amin'i MAPAR sy kandidà mahaleotena roa matanjaka sy nanambola nandrakofana haino aman-jery isan-karazany dia i Jaytaxxx, tompon'ny rdj, sy i Veronique izay malaza ho mahazo fanohanana ara-bola amin'ny vondrona mpampiasa vola shinoa (tsy voamarina). Ny mpanoratra, araka ny efa hahafantaran'ny mpamaky azy, dia tsy miala amin'ny kandidà tohanan'ilay sesintany any Afrika Atsimo amin'ny fomba ofisialy, mba tsy hampiparitaka ny vato (iray amin'izy mirahalahy).
Jentilisa 18 desambra 2013